श्रीमती ७ प्रकारका हुन्छन् ! तपाईकी श्रीमती कुन वर्गकी ? – Life Nepali
काठमाडौ । विभिन्न अध्ययन, अनुशन्धान र विश्लेषणले मात्र हैन धार्मिक ग्रन्थ र धार्मिक चिन्तनबाट श्रीमतीका अनेक प्रकार छुट्याईएको छ । यसले काम ब्यवहार गर्न सजिलो बनेको छ । त्यसो भए के तपाईलाई थाहा छ त श्रीमती कति प्रकारका हुन्छन् । वा तपाईकी श्रीमती वा तपाईकी हुनेवाला श्रीमती चै कुन वर्गमा पर्न सक्छिन् । अहिले नै जान्नुभयो भने सजिलो हुनेछ । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous एउटै यु’वतिले गरिन १० बर्षमा ८ जना सङ्ग बिहे !
Next १० घण्टाको श’ल्यक्रिया पछि अल’ग्गै छि’निएको ह’त्केला जो’ड्न सफल भए डाक्टरहरु !